Fandrafetana ny fiteny - Wikipedia
Ny fandrafetana ny fiteny iray dia fanandramana mianjady amin'ny fampiasana ny fiteny iray. Natao izany mba hahafahana mampiasa ilay fiteny anaty taranja maromaro kokoa. Ny tanjona, dia hanova ny fomba fampiasana ny fiteny iray. Ho an'ny fiteny maro dia maro, misy ireo fikambanana manokana izay manan-tanjona ny handrafitra ny fiteny. Azontsika alaina ho ohatra ireo Académie Française ny teny frantsay na ny Akademia Malagasy ny teny malagasy.
Amin'ny ankapobeny, betsaka ireo fomba fandrafetana fiteny :
Fandrafetana ny fiteny : izay mamorona ary manavao ny voambolana ampiasaina. Natao hamorona ny rafibikan'ilay (stantard) fiteny ny ny mpandrafi-piteny, toa ny tsipelina na ny fitsipi-pitenenana. Ny fahadiovana ny fiteny (purisme linguistique) indray dia mikasika ny fanalana ny fianjadian'ny teny vahiny noho izy ireo "mandoto" ny fiteny. An'ny fandrafetana ny fiteny ihany koa izany hetsika izany.
Ny fandrafetana ny sata dia hanova ny fomba fampiasana ilay fiteny. Izy io dia manan-tanjona ny hanaovana ireo tenim-paritra ho teny ofisialy. Ary matetika koa ny asa ataon'ny mpandrafitra ny sata dia mamorona ny soratry ny teny izay mbola tsy nosoratana tany aloha.
Ny fandrafetana ny fianarana dia mikasika ny ampianarana ny fiteny iray. Mba hahamora ny fampianarana ary mba hanintona ny hafa hianatra ilay fiteny.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fandrafetana_ny_fiteny&oldid=626408"
Voaova farany tamin'ny 14 Martsa 2013 amin'ny 11:03 ity pejy ity.